Wax Badan Ka Baro Xanuunka Gaaska Caloosha - Daryeel Magazine
Wax Badan Ka Baro Xanuunka Gaaska Caloosha
Maanta waxaynu soo qaadaneynaaa waxa uu yahay gaasku ( gastritis) waxa keena calamadaha lagu garto sida loobaaro iyo waliba sida lodaaweeyo.
In badan inaad mantagt
Inaad isticmaasho daawooyinka layidhaah anti-inflammatory drug sida asprin ta.
Waxaa kaloo sababbikara loona aaneeyaa:
Helicobacter pylori (H. pylori) waa bakhtitire (bacteria) ku nool xuubka (mucus) ku dahaaran caloosha. Haddii la daaweyn waayana caabuq ama humbuluuluq (infection) ayuu kuu horseedayaa boog ama nabar (ulcer) dadka qaarna cancer xagga caloosha ahi ayey ku sababtaa.
Waa dhiig la’aan timaadda marka calooshu ay weydo waxyaabihii dabeeciga ahaa ee looga baahnaa in si sax ah ay u soo nuugaan ama ay u burburiyaan vitamin B12.
Inuu soo noqnoqdo xanuun xagga caloosha ah sidii nabar oo kale. Caloosha oo dibbirta, apitet xumo. Miisaanka oo yaraada.
Waxaa la sameeeyaa baaritaan.
Upper endoscopy: waa qalab (tuubbo afka kamarad ku wadata) bukaanka afka laga geliyo ilaa caloosha lagu dhaadhiciyo, waxaa hubinayaa in calooshuay leedahay wax caabuq ah ka dibna waxaa la sameeynaa biopsy waa hab lagu soo jaro sample yar oo tissue ah (wax yar ka mid ah hilibka caloosha ama gaskeeda) ka dibna shaybaadhka (laboratory) ayaa lagu baadhaa.
Baadhitaan dhiig (Blood test): waxa la hubinayaa in unugyada dhiigga cas (red blood cell) uu ku yaryahay bukaanka uu yahay dhiig la’aan (anemic).
Fecal occult blood test (stool test) (baadhitaan saxaro): waxaa lagu ogaadaa in saxarada bukaanka dhiig la socdo.
Marka la ogaado waxa sababay ama bakhtitiraha (bacteria) keenay, waxaynu u kala saaraynaa daawada dhawr nooc :
-Medications that block acid production and promote healing.
Waxay xirayaan acidka ay calooshu sii dayso waxayna kor u qaadaan inuu qofka bogsado waaxaa ka mid ah daawooyinkaan.
Omeprazole (Prilosec), lansoprazole (Prevacid), rabeprazole (Aciphex), esomeprazole (Nexium), dexlansoprazole (Dexilant) and pantoprazole (Protonix).
-Medications to reduce acid production.
Ku wani waxay yaraynayaan acidka waxaana ka mid ah:
histamine (H-2) blockers, waxay yareynayaa acidka lagu soodeeynaayo marakin dheefsiidka iyo waliba xanuunka badan.
Sidookale kuwa acidka joojiya waxaa ka mid ah :
ranitidine (Zantac), famotidine (Pepcid), cimetidine (Tagamet) and nizatidine (Axid).
-Antacids that neutralize stomach acid. ku wani waxay caadi (neutralize) ka dhigayaan acidka si deg deg ahna way kuu bogsiinayaan.
Haddii aad qaadatid talada dhakhtarka oo ay ku caawini waydo. Ha ka quusan Raxmadaa Allah ogow marwalba marka uu albaab kaa xidhmo, Allah albaab kale ayuu kuu furaa. Xasuuso marwalba inaad isku akhridid intii aad quraan taqaanid oo dhan kolba intii aad ka gaadhid. Quraanku waa shifa ugu wayn ee aad isku dawyn kartid. Haddana isku akhri 7 faatixo salaad kasta ka bacdi.InshaAllah waad fiicnaan, hanna iloobin adkaarta iyo ducooyinka una sabr inshaAllah. Waxaa kale oo jira albaab kale oo haddii uu Allah kuu qadaro aad isku dawayn kartid, taasina waa waxyaabaha dhirta aha ama dhulka ka soo baxa ee dabeeciga ah. InshaAllah maqaalka kale ee xiga kan waxaan soo ban dhigi doonaa waxyaabo aad u faro badan oo dabeeci ah oo ku caawin kara ee la soco inshaAllah.
Wax Ka Baro Xanuunka Qoor-Gooyaha Canjeeladu/Laxooxdu Ma Sababta Gaaska Caloosha? Cuntooyinka Iyo Daawooyinka Ay Haboon Tahay Inaan La Cunin Caloosha Oo Maran Dawooyinka Gaaska Loo Cuno, Khatartooda Caafimaad Ayaa Ka Badan Waxtarkooda